Shiinaha keydinta muraayada darbiga muquuninta - Soosaarayaasha - Dongguan Qiaofeng Qalabka Qalabka Caaga Co., Ltd
Hoyga >Alaabta >Qaybaha qalabka guryaha caaga ah>Fiilo darbi wareega
13 * 42MM Gaari gaar ah-oo ah tuubbo ballaarin oo loogu talagalay guddiga gypsum
10 * 32MM Gaari-in gaar ah-in tuubo ballaarinta loogu talagalay guddiga gypsum
1. Ma leedahay warshad kuu gaar ah Haa, waxaan soo saare ku nahay Shiinaha in ka badan 10 sano. Warshaddeenu waxay ku taal Gobolka Guangdong. 2. Sideen ku booqan karaa wershadaada? Fadlan si naxariis leh noo sii ogeysii haddaad qorsheyneyso inaad booqato. Waxaan ku tusi karnaa jidka ama waxaan kugu soo qaadan karnaa saldhigga ama garoonka diyaaradaha. 3. Ma bixisaa shaybaarro bilaash ah?
15 * 32MM Gaari gaar ah-oo ah tuubbo ballaarin oo loogu talagalay guddiga gypsum